OTU ESI EJI NTUGHARIA THOR - ESI MEE - 2019
Jiri ihe nyocha ihe nchọgharị Tor
Usoro ihe omume Tor Browser, nke na-adịbeghị anya na-enwekarị mmasị na ndị na-achọ ịfụfụ Intanet n'enweghị aha. Ma iji mee ihe dị mfe na ọrụ kwesịrị ekwesị na mmemme ahụ, ị ​​ga-enwe ike iji usoro ihe omume ahụ n'ụzọ ziri ezi.
E nwere ọtụtụ nuances mgbe ị na - arụ ọrụ na Tor nchọgharị, ma ọ dị mkpa ịkwado ndị isi ka i nwee ike idozi nsogbu ahụ n'enweghị nsogbu na ọtụtụ ọrụ ọzọ.
Nbudata nsonaazụ nchọgharị Tor
Gbaa usoro ihe omume a
A na-eme nchọgharị nchọgharị Thor na ụzọ kachasị aga: onye ọrụ kwesịrị iji aka-pịa okpukpu abụọ na mkpirikpi ụzọ, ọ na-emeghe ozugbo. Ma, ọ na - eme na Nchọgharị Nchọgharị anaghị achọ ịgba ọsọ. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nsogbu a na ọtụtụ ngwọta.
Ihe omumu: Nsogbu ya na nkedo nke nyocha ihe nchọgharị Tor
Ihe nkuzi: Mmekọrịta njikọ netwọk na Tor Browser
Mgbe ị na-eji ihe nchọgharị ahụ, onye ọrụ ga-enwe oge iji dozie usoro ihe omume ahụ. Mgbe ahụ, ịchọrọ ịmụ ihe niile, chọpụta ma jide n'aka na edoziri ntọala ihe n'usoro n'enweghị njehie.
Ihe Ọmụmụ: Dezie Nchọgharị Nchọgharị nke onwe gị
Mgbe onye ọrụ ga-ewepu ihe nchọgharị Tor na ihe dị iche iche. Mana ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ihichapụ ihe omume ahụ, ụfọdụ ndị ọrụ ahụhụ na njehie na mweghachi nke usoro ihe omume ahụ. I kwesiri ima otua esi ewepu ngwa n 'ugbuala Tor, nke mere na enweghi nsogbu.
Ihe Ọmụmụ: Wepụ Nchọgharị Nchọgharị na komputa gị kpamkpam
Onye ọ bụla nwere ike iji ihe nchọgharị ahụ, ọ dị mkpa ka ị ghọta nsogbu ndị bụ isi mgbe ị na-arụ ọrụ, otu esi edozi ha, nhọrọ maka ntọala na ihe ndị ọzọ. Ị mụtara otú e si eji ihe nchọgharị Tor.